Kindle Paperwhite Signature Edition, mpamaky vaovao mamoaka tsy nahy | Ireo mpamaky rehetra
Ny fahatongavan'ilay areti-mandringana manerantany dia nanjary, ankoatry ny zavatra hafa, miadana ny tontolon'ny teknolojia, toy ny fiarahamonina rehetra. Ary izany dia nahatonga ireo orinasa lehibe toa an'i Amazon hanemotra ny fandefasana azy ireo hatramin'ny roa taona lava kokoa noho ny nandrasana. Nandritra ny fotoana ela izay maro amintsika izay manaraka ny vidiny sy ny tolotra Kindle azontsika ny fanavaozana Kindle Paperwhite, Mpamaky kintana ao Amazon izay tsy nohavaozina nandritra ny taona maro.
Vao haingana, Tsy nahy naneho ny Kindle Paperwhite vaovaon'i Amazon, fitaovana sasany nanaitra ny rehetra.
Ny fiovana voalohany tokony horesahintsika momba ireo maodely vaovao ireo dia Fananganana efijery 6,8 inch. Farany nanaiky lembenana i Amazon ary nahatratra ny haben'ny efijery lehibe kokoa ny fitaovany, na dia mijanona aza ny hakitroky ny pixel.
Tsy toy ny maodely Kindle hafa, ny Kindle Paperwhite vaovao dia ho tonga amina fanontana roa: fanontana "normal" misy efijery 6,8-inch sy fitehirizana 8Gb ary kinova antsoina hoe Signature Edition hanatsara be ny maodely sy hanasongadinana a Fitehirizana 32 Gb sy efijery 6,8-inch.
Samy hanana ny maodely roa ny taratasy fanamarinana IPX68 fa efa manana ny maodely ankehitriny ianao ary hanana sensor jiro mafana ary koa hampitomboina ny isan'ny jiro tarihin'ny jiro, satria efa ananany ny fitaovan'ny orinasa mpifaninana.
Mampalahelo fa ireo maodely ireo Tsy manana efijery miloko na mety ahafahana manatanteraka rakitra epub izy ireo. Seho izay andrasan'ny mpampiasa maro ary toa nanapa-kevitra ny hitondra azy any amin'ny fitaovana premium premium i Amazon satria tsy manana izany maodely Kindle Paperwhite izany.
Ny famoahana feo sy tsy misy tariby dia ny Kindle Paperwhite Signature Edition vaovao
Ny tena nahasarika ny saiko (tsy niraharaha ny haben'ny efijery vaovao) dia ny fampidirana ny Module Bluetooth miaraka amina feo hihainoana boky audio. Fiasa iray izay tsy nanana lojika nanana ireo fitaovana farany ambany, ny Basic Kindle saingy tsy nanana an'io maodely misy tombony avo kokoa io. Tsy isalasalana fa noho ny fahombiazan'ny re, Serivisy boky-peo any Amazon, izay mahatonga ahy hieritreritra fa miasa io ho lasa asa fototra tahaka ny fampisehoana backlit.
Araka ny fantatsika, na ny Kindle Paperwhite na ny Kindle Paperwhite Signature Edition dia tsy manana efijery miloko, saingy manana fiasa tsy tazana amin'ny eReaders izy ireo fa toa ho hitantsika amin'ny mpamaky bebe kokoa, famandrihana tsy misy tariby. Ny Kindle Paperwhite Signature Edition dia hanana famahana finday na dia toa tsy midika akory izany fa tsy manana fiainana bateria lava. Mampalahelo fa ny Kindle Paperwhite mahazatra dia tsy manana io fiasa io satria toa vahaolana tsara ho an'ireo fotoana te-hamaky ireo ary lany ny bateria.
Ny loharanon'ity vaovao ity dia Amazon tenany, nanomboka tamin'ny ny tranonkalanao kanadiana dia nametraka tamin'ny fomba diso ireo specs vaovao ary ireo modely vaovao ary koa ny vidin'ny fitaovana tsirairay.
Rehefa afaka taona maro nefa tsy nampiakarana ny vidiny, Nampiakatra ny vidin'ny Kindle Paperwhite i Amazon, miaraka amin'ny $ 149 ho vidiny vaovao ho an'ity eReader ity. Ary amin'ny raharahan'ny Kindle Paperwhite Signature Edition ny vidin'ny fitaovana dia mahatratra $ 209 isaky ny singa.
Ny vidiny araka ny hitanao dia nisondrotra be fa raha raisina ny fihenan'ny tariby tsy misy tariby dia toa tsy ny fiakarana ho an'ireo tombony atolotra azy izany. Ary amin'ny maodely mahazatra, na dia mampitombo 10 dolara aza ny vidiny taloha, mbola ambany noho ny ambiny amin'ireo maodely miaraka amin'ny efijery 6,8-inch, zavatra izay tsy isalasalana fa hahatonga ny mpampiasa maro hisafidy ny fitaovana Amazon.
Moa ve ny Kindle Paperwhite no hany maodelin'i Amazon hahazo fanavaozana?
Amin'izao fotoana izao dia tsy mahalala afa-tsy ireo maodely vaovaon'ny Kindle Paperwhite isika, tsy mahalala na inona na inona momba ny Kindle Oasis na ny Kindle Basic isika, modely izay tsy nohavaozina efa ela ary afaka manao azy miaraka amin'ny Kindle Paperwhite.
Fantaro ny masontsivana momba ny ho avy vaovao Kindle Basic Mora izany, fa ahoana kosa ny Kindle Oasis? Ny Kindle Paperwhite Signature Edition dia tsy mampiakatra ny vidin'ny fitaovana afovoany ihany fa manamboatra ihany koa ny fampisehoana ny eReader avo lenta an'i Amazon dia nitombo. Araka izany, toa hitombo ny haben'ny efijery amin'ny fari-bola premium na farafaharatsiny ho hafa izy io. Ny efijery loko dia mety ho safidy tsara, na dia aorian'ny volana maromaro nanombohana aza, ireo orinasa lehibe ao amin'ity sehatra ity toa an'i Amazon dia mbola tsy mametraka ny tenany amin'ny teknolojia. Ny fampidirana ny fanoherana ny feo sy ny rano dia singa ihany koa izay tsy isalasalana fa ho eo amin'ny toerana avo ary ny famahanana tsy misy tariby dia mety ho asa iray hafa hodinihina. Avy eto dia misy fiasa vaovao azo atao, na dia manokana aza Heveriko fa hifantoka amin'ny fiasa vaovao vitsivitsy i Amazon, toy ny taloha tamin'ny Kindle Paperwhite voalohany na ny Kindle Voyage.
Mampalahelo fa tsy fantatsika hoe rahoviana no havoaka amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny Kindle Paperwhite vaovao, saingy tsy dia haharitra izany satria maro ny mpampiasa miresaka momba ny kojakoja vaovao ho an'ireo maodely ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Kindle Paperwhite Signature Edition, mpamaky vaovao mamoaka tsy nahy